Mogadishu Journal » 2019 » May » 17
Mjournal :-Dalalka Jabuuti, Itoobiya ,Uganda iyo Koonfurta Suudaan ayaa gaaray heshiiskii u horreyay oo ay ku doonayaan inay ku dhistaan qad isku xira caasimadohooda. Shir labo maalmood socday ayaa lagu soo afjarayay kormeerka lagu sameeyay hirgelinta qadka. Dhinacyada ay...
Mjournal :-Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegto madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/XM/WM/222-310/052019, uu Cafis Guud u fidiyey Maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran. Waxaanay u dhignayd Wareegtada Madaxweynuhu Sidan:-...
Mjournal :-Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa sameeyey dakhli ah 434 milyan oo dollar sanadii 2018, sida ku cad warbixin uu ugu gudbiyey Xafiiska Anshaxa Dowladda oo shaaca laga qaaday. Lacagtaas ayaa waxyar ka yar dakhligii madaxweynaha soo galay sanadii 2017 oo ahaa 450...
Elders from Mandera County are said to have gone back to Somalia to renegotiate the Sh150 million ransom that Al-Shabaab militants are demanding for the release of two Cuban doctors kidnapped last month. The elders had been given the demands when they went to a remote village in...
Although sports media rarely highlights this facet of the soccer star, Ronaldo has always been close to the Palestinian cause Portuguese footballer, Cristiano Ronaldo, donated US$1.5 million to the people of Palestine during the backdrop of the Muslim holy month of Ramadan. The...
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya deegaanka Diif ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidanka dowladda Kenya, kuwa Jubbaland oo dhinaca ah iyo sidoo kale xubno Ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalkaan ayaa yimid, kadib...
Mjournal :-Madaxwaynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo xalay ka qayb galay kulan ay soo agaasimeen Jaaliyadda degaanada Galmudug ee ku nool magaalada Nairobi ayaa ka waramay arrimo badan oo khuseeya xaalada dalka. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa looga jawaabay hadalkii ka soo...
Mjournal :-Guddigaan oo ay dhawaan Magacaawday Xukuumadda Soomaaliya si ay Go’aan uga gaaraan shirkadaha u tartamaya Xujeyda Soomaalida ee Sanadkaan iyo qiimaha Xajka sanadkaan ayaa soo gudbiyey go’aanadooda. Suldaan Cabdi Qani Qorane oo ka mid ah xubnaha Guddiga oo Akhriy...
Mjournal :-Wararka lag helayo deegaanada Maamulka Hir-Shabeelle ayaa waxaa ay sheegayaan in saarakiishii kormeerayaasha iyo ilaalinta Imtixaanka ee dowladda Soomaaliya u dirtay deegaanadaas ay guud ahaan isaga soo baxeen,kadib amarkii Madaxweynaha Maamulkaas Maxamed Cabdi Waare....